I-logo entsha ye-Ebury ilandela iindlela zoyilo zika-2017 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uphawu oludumileyo IPenguin Random House ivuselelwe nge logo entsha uyilo ngakumbi olulandela iintsingiselo ezinikwe ngo-2017 ngokunxulumene noyilo. Oko 'kuxhonywa' kuyabonakala iilogo ezahlukeneyo zeemveliso ezinjengeFanta, UCalvin Klein okanye nokuba ngubani omtsha obonakalayo wegcisa kunye nemvumi uElton John.
I-Ebury ithatha indlela efanayo nezo ntengiso zinkulu kunye nexesha elichongiweyo lokuchonga umkhwa wezo nkampani ngu phawula iilogo zakho ngawo onke amagama 'oonobumba abakhulu'. Umahluko phakathi kwelogo yakudala ye-Ebury kunye nale ikhoyo ngoku ingaphezulu kokubonakala ngathi yeyangoku kwaye ihambelana neentsuku abazidlalayo.
Bathatha ubuchule bokubuyisela unobumba omncinci, ilogo ebomvu ebomvu, yoyilo olutsha oluthatha isikimu sombala Uphawulwa ngokuba 'mtsha kwaye uyadlamka' Ngombono womsebenzisi oza kudideka kancinci yindlela oluhle ngayo utshintsho kuye.
Enye yezona zinto zinomdla wokufumana 'amandla amakhulu' kukuba Ukusetyenziswa kwemibala emi-opaque emibini kuvumela ukwenza umphumo-ntathu ukuba iyakwazi ukukhohlisa iso ekuboneni kuqala kwelogo entsha. Oko ikunikezelayo kukuqonda okungakumbi kokudala ngokudala imvakalelo yokungafezeki ngokubekwa ngaphezulu; Umzekelo ocacileyo welogo entsha ye-Ebury.
Ukuba uyongeza kukhethwe imibala efezekisa umahluko olungileyo phakathi kwabo, isiphumo sonyuswa ngokuya kwilogo ekhulelwe kakuhle kwaye yangoku ebonisa ukuba siphi kwiimpawu zangoku zokuyila ilogo.
Kuphela nje umcimbi wexesha qala ukuvela kule logo intsha kwiimveliso zikaPenguin kunye nentengiso, kwaye ke sinombono ongcono wokujonga ukuba olu tshintsho lukhulu luthetha ntoni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Uphawu lwePenguin lulandela umkhwa woyilo lwangoku kunye nophawu lwayo olutsha lweEbury